Blockchain Izindaba 05.06.2018 - Blockchain Izindaba
Coinbase inwebeka Japan
Coinbase uye yamemezela izinhlelo zayo ukuqalisa ehhovisi eJapane. Esikhathini isaziso, Coinbase wathi asebenza ne FSA Japanese ukuqinisekisa ukuhambisana nomthetho kuzo zonke izigaba kanye kanye evunyiwe, uhlela ukunikeza imikhiqizo yabo nemisebenzi kubantu Japan.
Wamukela Fintech Umholi Nao Kitazawa
Njengengxenye yemizamo yethu ukusheshisa ukwamukelwa lembulunga yonke elinezinto ezinhlobonhlobo cryptocurrency, namuhla siyakucela ekumemezeleni kwethulwa Coinbase sika ehhovisi eJapane. Ngaphansi kobuholi kakhulu ohlonishwayo futhi ebatshazwa kakhulu umholi fintech, Nao Kitazawa, Ihhovisi lethu elisha ngeke kubeke isisekelo sokuba zimali Japan mfihlo ukufinyelela ezahlukene imikhiqizo Coinbase sika. Njengoba kwezinye izimakethe, sihlela ukuba enze izinto ngendlela esicatshangelwe ukukhishwa zethu eJapane, okusho isandla-in-hand isebenzisana FSA Japanese ukuqinisekisa ukuhambisana nemithetho yendawo zonke izigaba.
AmaBrazilians Uvula ngaphezulu mfihlo zokuhweba akhawunti kuka yendabuko Brokerage akhawunti
Abantu abaningi Uvula cryptocurrency zokuhweba akhawunti e-Brazil kuka yendabuko Brokerage akhawunti.
Ngonyaka edlule, ukushintshana ngokuthi Foxbit kwadingeka cishe 100,000 abasebenzisi ababhalisiwe. Namuhla, banayo 400,000 abasebenzisi ababhalisiwe aphume ezilinganisiwe 1.4 million Uvule akhawunti nabo ziqhathaniswa nezimbangi zazo ezinkulu ezintathu ngesikhathi eminyakeni engaphansi kwemibili '. Qhathanisa ukuthi kuya cishe 600,000 abanale isitokwe Brokerage akhawunti futhi sobala: AmaBrazilians baye bathola cryptocurrency. Ngo 2016, amaBrazilians wathutha $160 abayizigidi ezingu-futhi aphume Bitcoin. Ngonyaka odlule, ke hit emhlabeni $2.4 bhiliyoni.
"Ukuze guys ababesebenzisa ukufihla zamadola ngaphansi omatilasi abo, Manje zinikelwe ukufihla ke Bitcoin,"U-Eduardo uthi Ferreira, ikhanda yentuthuko ngamazwe ebhizinisi Foxbit eLondon. "Kuyinto abafundi kokuyithenga. Kuyinto abashayeli bamabhasi eneminyaka engu-60 ubudala," uthi.
Kraken Daily Market Umbiko 04.06.2018
$150M adayiswa kuwo wonke ezimakethe namuhla
Too ekuseni ukuthengisa cr ...
Inkantolo avumela Mt. G ...
Thumela Previous:Blockchain Izindaba 04.06.2018
Thumela Landelayo:Blockchain Izindaba 06.06.2018